४ दिनमा ‘मलंग’ले कति कमायो ? - Everest Dainik - News from Nepal
४ दिनमा ‘मलंग’ले कति कमायो ?
काठमाडौंः आदित्य रोय कपुर र दिशा पटनीको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ‘मलंग’ अहिले हलमा प्रदर्शन भइरहेको छ । रिलिजको पहिलो दिन अर्थात् शुक्रबार कमजोर व्यापार गरेको यस चलचित्रले शनिबार र आइतबार भने सन्तोषजनक व्यापार गर्न सफल भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस ‘मलंग’ले कति कमायो पहिलो दिन?
‘मलंग’लाई यस वर्षको प्रतिक्षित चलचित्रको रुपमा हेरिएको छ । चलचित्रको प्रचार सामग्रीलाई दर्शकले रुचाएका थिए । त्यसैले चलचित्रले राम्रो सुरुवात गर्ने धेरैको आकलन थियो । तर, चलचित्रले सोचे जस्तो दर्शक पाएन ।
यति हुदाँ हुदैँ पनि ‘मंलग’ आदित्यको सबैभन्दा बढि इनिसियल व्यापार गर्ने चलचित्र बनेको छ । आदित्यको चलचित्रले आजसम्म पहिलो दिन ६ करोड माथिको व्यापार गर्न सकेको थिएन । मोहित सुरीको निर्देशनमा बनेको यस चलचित्रमा अनिल कपुरको पनि मुख्य भूमिका रहेको छ ।
ट्याग्स: आदित्य रोय कपुर, दिशा पटनी, मलंग